Maarso Latin Amerika - Maarso Adduunka
Bogga ugu weyn » Latin Amerika Maarso
The 1st Latin Latin Multiethnic iyo Pluricultural Maarso ee Rabshadaha
"Rabshadaha bisha Maarso illaa Latin America"
Shucuubta Laatiin Ameerika iyo Kaariibiyaanka, dadka asaliga ah, dadka Afro-ka ah iyo dadka deggan dhulkan ballaadhan, waxaan isku xireynaa, abaabulnaa oo soconnaa, si looga gudbo noocyada kala duwan ee rabshadaha loona dhiso midowga Latin Ameerika bulsho adag oo aan rabshad lahayn.
Dhaqdhaqaaqayaasha, kooxaha, ururada bulshada, hay'adaha dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay, iskuulada, jaamacadaha, waxaa ka go'an ficilkan Latin Amerika ee Xun.
Fulinta ficilada kahor iyo inta lagu gudajiro bisha Maarso dhacdooyinka dal-ku-galka iyo fool-ka-foolka ah ee waddan kasta, sida socodka, dhacdooyinka isboortiga, socodyada gobollada ama kuwa maxalliga ah; horumarinta shirarka, miisaska wareega, aqoon isweydaarsiyada faafinta, xafladaha dhaqanka, wadahadalada, ama ficilada hal abuurka ah ee lagu taageerayo Rabshadaha, iwm. Waxaan sidoo kale sameyn doonaa latashi iyo cilmi baaris ku saabsan mustaqbalka Latin America oo aan dooneyno inaan dhisno.
1- Warbixinta iyo badalida dhamaan noocyada rabshadaha ee ka jira bulshooyinkeena: jir, jinsi, hadal, cilmi nafsi, dhaqaale, midab iyo diin.
2- Kor u qaadida takoor la’aan iyo fursado loo siman yahay iyo in laga takhaluso fiisooyinka u dhexeeya dalalka gobolka.
Magaalooyinka asalka ah
3-Xaqiiji Shucuubta Dhaladka ah ee ku baahsan Latin America, adoo aqoonsanaya xuquuqdooda iyo waxtarka awoowayaashood
4- In kor loo qaado wacyiga ku saabsan dhibaatooyinka deegaanka iyo deegaanka ee lagu difaacayo kheyraadka dabiiciga. Maya macdan qodista iyo sunta cayayaanka lagu iibiyo dalagga. Helitaanka biyaha aan xadidnayn ee bini-aadamka oo dhan.
Ka daa dagaalka
5- In gobolada ay dastuuriyan ka tanaasulaan in dagaal loo adeegsado qaab lagu xaliyo khilaafaadka. Hormarinta iyo saami ahaanta hubka caadiga ah.
Maya saldhigyada militariga
6- Waxaad dhahdaa Maya rakibaadda saldhigyada milateri ee shisheeyaha oo waxaad dalbaneysaa in kuwa jira laga baxo.
Kor u qaad saxiixa TPAN
7- Kor u qaadista saxiixa iyo ansaxinta Heshiiska Mamnuuca Hubka Nukliyeerka (TPAN) ee gobolka oo dhan.
Ka Dhigida Rabshadaha Mid La Arki Karo
8- Samee ficillo aan xasilooneyn oo muuqda una hiilinaya nolosha gobolka.
Waxaan rajeyneynaa inaan u safrinno gobolka si aan u xoojino midowgeena Latin Amerika iyo inaan dib u dhisno taariikhdeena guud, iyadoo la raadinayo isku duubni, kala duwanaansho iyo Rabshado.
Inta udhaxeysa Sebtember 15, 2021, Labaatankii sano ee madax-bannaanida waddammada Bartamaha Ameerika iyo Oktoobar 2, Maalinta Caalamiga ah ee Rabshadaha.
"KU XIDHIIDHKA KHEYR WALBA OO KAGA MID AH, Abuuritaanka Wacyigelinta inay tahay, KELIYA NABAD IYO NOLOL, SIDII AY KHASBADU U FURI DOONAAN AYAANTA"